Khabar Kantipur » मार्सी धान रोप्न जुम्लाका किसानलाई भ्याइ नभ्याइ
मार्सी धान रोप्न जुम्लाका किसानलाई भ्याइ नभ्याइ
जुम्ला–यहाँका किसानलाई यतिबेला रोपाइँको चटारो छ। जुम्लाको आग्लो स्थानमा फल्ने धान काली मार्सी धान रोप्न किसानलाइ भ्याइ नभ्याइ भएको हो । अर्कातिर पाकेको जौ भित्र्याउने चटारो पनि छ । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ८५० मिटर उचाइमा रहेको पातारासी गाउँपालिका छुमचौर ज्यूलोमा हरेक वर्ष जेठको मध्यतिर कालीमार्सी धान रोपिन्छ । यो धान फल्ने विश्वकै अग्लो स्थान हो ।
यहाँका कृषकलाई अहिले जौ काट्ने र मार्सी रोप्ने चटारो छ । बजारमा माग बढेपछि यहाँका किसान मार्सीको क्षेत्र विस्तारतर्फ लागेका छन् । चिसो मौसमका कारण समयमै धान नरोपे समयमा नपाक्ने भएकाले यहाँ जेठ महिनाको पहिलो साताबाटै रोपाइँ सुरु गरी असार पहिलो सातामा सक्ने गरिन्छ । काली मार्सी धानको बिउ सामान्यतय चैत १२ गते बिउ भिजाउने, १६ गते उतार्ने र २० गते किसानले बेर्ना राखिन्छ ।
काली मार्सी धान जुम्ला जिल्लाको पहिचान हो । यो धान कात्तिकको पहिलो सातादेखि दोस्रो सातामा भित्र्याइन्छ । उत्पादन कम हुने भए पनि यसको चामल निकै पोषिलो मानिन्छ । जुम्लामा उन्नत जातको धान लगाउदा बढी उत्पादन हुने र असिना पानीले पनि नझार्ने भएकाले पछिल्लो समयमा किसानहरू उन्नत जातको धान रोप्ने गरेका छन् । सामान्य पानी पर्दा पनि झर्ने भएकाले काली मार्सी धान लगाउने्नलगाउने निर्णय गर्न नसकेको चन्दननाथ नगरपालिका ४ की पूजा भण्डारीले बताइन् ।
जिल्लाको धान उत्पादन हुने दुई हजार ९५० हेक्टरमध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै काली मार्सी लगाइएको कृषि कार्यालयको तथ्याङ्क छ । काली मार्सी धानमा रोग धेरै लाग्ने कारण कृषि कार्यालय जुम्लाले पनि किसानलाई मार्सी लगाउन सुझाव दिने गरेको छैनन् ।
तर कृषि विज्ञहरूले धान जोगाउन सुझाव दिएने गरेका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश किसानले खेतमा उन्नत जातको धान रोप्ने गरेपछि कालिमार्सी धान जोगाउन किसानलाई कृषि विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
हाई ब्लड प्रेसर भएको ब्यक्त्तीले के खाने ? के नखाने ?
हाई बीपी हृदय रोगको इशारा हुन सक्छ । डायटमा सैचुरेटिड फैट जस्तो कि मक्खन, घ्यू, तर आदि कम गर्नुस् । किनकी यसले मुटुको नली बन्द हुने खतरा बढ्छ । जति सकिन्छ, लो फैट डायट लिनुस् ।
– कैल्शियम, मैग्नीशियम र पोटैशियम आदि प्रचुर मात्रामा खानुस् । यो तत्व दूध, हरियो साग, सब्जीहरू, दाल, सुन्तला, स्ट्राबेरी, बदाम, केरा र सीताफल आदिमा खूब पाईन्छ ।
– सूप, सलाद, अमिलो फलफूल, कागती पानी, नरिवल पानी, चना, भटमास आदि खानु फाईदाजनक छ ।
– गाजर, बन्दागोभी, ब्रोकाउली, पालुङ्गो, कटहर, टमाटर, लहसुन, प्याज, हरियो सागपात र मौसमी फल खूब खानुस् ।
– पानी खूब पिउनुस् । दिन भरमा करीब १० गिलास पानी पिउनुस् ।
– ओमेगा थ्री वाला चिज, जस्तो कि ओखर, बदाम, माछाको तेल, आदि खानुस् । दैनिक पाँच/सात दाना बदाम र ३/४ वटा ओखर अवश्य खानुस् ।
– बीपीका लागि आजभोलि म्ब्क्ज् डायट यानी डायट्री अप्रोचिस टु स्टप हाइपरटेन्शन खूब चलनमा छ । यसमा के नखाने भन्दा पनि ज्यादा जोड यस कुरामा हुन्छ कि के खाने । यसलाई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशनको साथ–साथै इण्डियन नेशनल क्यान्सर ईन्स्टिच्यूटले पनि रेकेमेण्ड गरेको छ । यसमा दिन भरमा एक किलोसम्म फल–तरकारी र कार्बोहाईड्रेट र लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्समा खूब जोड दिइएको छ ।
– नुन कम खानुस् । दिनमा करीब आधा चम्चा नुन काफी हुन्छ। टेबल साल्ट यूज नगर्नुस् । दिनभरमा करीब आधा चम्चा नुन खानुस् । यो हामीलाई खानबाट सजिलै प्राप्त हुन्छ । त्यसो त अन्न, फल, सागसब्जीहरू आदिबाट पनि हामी नेचरल तरिकाले नुन प्राप्त गर्दछौं। हप्तामा एक पटक बिना नुनको खाना खाने आदत बसाउनुस् ।
– सस, अचार, चटनी, अजीनोमोटो, बेकिंग पाउडर आदिबाट टाढै रहनुस् । पापड पनि बिना नुन वाला खानुस् ।
– पैक्ड या फ्रोजन आइटम नखानुस् । यसमा प्रिजरभेटिभ हुनुको साथै नुन पनि ज्यादा हुन्छ । यसैगरी बेकरी आइटम्समा सैचुरेटिड फैट ज्यादा हुन्छ । चिप्स, बिस्कुट, भुजिया, कुकीज, फर्कोजन मटर, केक, पेस्ट्री आदिबाट बच्नुस् ।
– खानामा माथिबाट नुन नछर्किनुस् । सलाद, आदिमा पनि नुन नहाल्नुस् ।
– नियमित रुपबाट नान भेज खाएर हेभी नान भेज (रेड मीट आदि) खानबाट बीपीको आशंका बढ्छ ।
नोट: बीपी कन्ट्रोल गर्नमा डायटको रोल ५० प्रतिशत रहन्छ । स्ट्रेस मैनेजमेन्ट र एक्सरसाइजबाट बाँकी फाईदा प्राप्त हुन्छ । योगासन, प्राणायाम र मेडिटेशन गर्नुस् । भ्रामरी प्राणायाम खासमा फाईदाजनक रहन्छ ।
मनलाई स्वस्थ राख्ने उपाए
– टेन्शन या स्ट्रेस कमभन्दा कममा रहनुस् ।
– दैनिक स्नान गर्नुस् ।
– प्रतिदिन व्यायाम गर्नुस् ।
– खूब पानी पिउनुस् ।
– रसदार फल जस्तै – सुन्तला, स्याउ, आप, केरा इत्यादि रोज खानुस् ।
– सफा, शुद्ध र पौष्टिक आहार खानुस् । जंक फूड जस्तै कि बर्गर, पिजा आदि कम खानुस् ।
– यदि टेन्शन हदभन्दा ज्यादा हुदैछ भने कुनै मनोवैज्ञानिकसंग सल्लाह लिनुस् । यी साधारण कुरालाई ध्यानमा राख्नु भयो भने तपाई सुखी र स्वस्थ जीवन जीउन सक्नु हुन्छ ।
ज्ञान बाँड्नु सबैभन्दा ठूलो धर्म हो त्यसैले सबैले लाइक तथा शेयर गर्न नभुल्नुहोला !!